Krizy 2002 : Mijoro ny vavolombelona iray !
Akotr’ireo mpandraharaha tamin’ny sehatra maro samihafa teto Madagasikara, anisan’ny niharan’ny tsindry hazo lena mafy tokoa ireo mpandraharaha ara-toekarena sy ireo mpitantam-bola nandritra ny fitondran’i Marc Ravalomanana (2002-2009).
Tamin’izany fotoana izany dia tsy namelan'izy ireo raha tsy nitsahatra tamin’ny asany noho ny firehan-kevitra politika tsy mitovy tamin’ny an’ny mpitondra. Novoizina ho politika avokoa ny raharaha rehetra teto Madagasikara, ary dia nifitsaka ireo niaran’ny tsindry hazo lena.
Isan’ireo i Taratrinihafa Rasolomahatratra Manjakasoa, niasa tamin’ny orinasa tahirim-bola tsy miankina teto Antananarivo ny tenany nanomboka tamin’ny taona 1982, ary voatendry ho sekreteran’ny sendikan’ny fitatanam-bola. Ny taona 2002 anefa, voatery nitsahatra tamin’ny asany izy. Antony, tsy nitarika ary tsy niaraka tamin’ny sendikany nitokona teny amin’ny 13 May izy tamin’ny taona 2001.
Nohezahan’ny Mpitondra tamin’izany hampidirana politika sy vohizina ho raharaha politika ny sehatra rehetra teto amin’ny firenena. Teo amin’ny sehatra nisy an’i Taratrinihafa Rasolomahatratra Manjakasoa, teknisiana no nilaina hampiodina ny raharaha tamin’ny rariny. Nosimbaina tanteraka ny fiainany, raha isan’ireo nanana ny naha izy azy izy. Nopotehina i Madagasikara tamin’io fotoana io.
Nanjakazaka tanteraka ny mpitondra tamin’izany fotaona izany. Nilatsaka ho fidiana izy ho an’ny tombotsoany. Vola lavitrisa no naodina vantany vao tonga teo amin’ny fitantanana ny filoha tamin’izany fotoana, nahatratra ny ampahany tamin’ireo i Taratrinihafa.
16 taona lasa izay no nitrangan’izay fahoriana niainan’ity raim-pianakaviana ity izay. Ny hany fanirian’i Taratrinihafa amin’izao fotoana dia tsy hiverenan’ny tranga toy ireny. Raha zohina ny tantara hoy izy dia i Andry Rajoelina ihany no nahavita soa teto amin’ity firenena ity, na tamin’izy mbola teo amin’ny fitantanana ny tanàna an’Antananarivo, na tamin’ny nandraisany ny fitondrana tetezamita.